मिक्लाजुङ हत्या काण्ड : एकैले ९ जनाको हत्या गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष, घटनास्थल नजिकै एक मृत भेटिए - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १७:२६ 385 पटक हेरिएको
मिक्लाजुङ : नौ जनाको हत्या भएको घटना स्थलबाट भागेर ज्यान बचाएकी १२ वर्षीया सीता खजुमले कपडाले मुख छोपेर आएका एक व्यक्तिले खुकुरी हानेर परिवारका सबै सदस्यको हत्या गरेको बयान दिएकी छिन् । उपचाररत खजुमको दाया हात भाँचिएको छ ।
गएराति पान्थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३, आरुबोटेमा ससुरा ज्वाईको घरमा ९ जनाको विभत्स हत्या भएको थियो । प्रदेश नम्बर एक प्रहरी स्रोतका अनुसार बिहानपख सम्पर्कमा आएकी सीताले खाना खाएर सुतिसकेपछि आएका एक व्यक्तिले खुकुरी हानेर पालैपालो ज्यान लिएको बयान दिएकी छिन् । परिवारका सदस्यमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि कसैले थाहा नपाउने गरी भागेर ज्यान बचाएको उनीले प्रहरीसमक्ष भनेकी छिन् ।
स्थानीयको सम्पर्कमा बिहान आएकी सीता अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बसेकी छिन् । घट्नास्थलमा दशमीबजार स्थित प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय रबि लगायतको टोली पुगेको छ । त्यस्तै घटनास्थलमा छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा टोली खटिरहेको छ । घटनाको जानकारी पाएलगतै अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरी कार्यालय, धरानका एसएसपी शरद खत्रीको नेतृत्वमा तालिम प्राप्त कुकुरसहितको टोली खटिएको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका प्रवक्ता डिएसपी सिद्धराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रहरीले घटनामा बालिका सीताले दिएको बयानलाई आधार बनाएर अनुसन्धान सुरू गरिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानले घटनामा एक जनामात्रै सहभागी भएको देखाउँछ।’ प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान भइसकेको छ । प्रहरीले पारिवारिक रिसिइबीका कारण दुई परिवारका ९ जनाको हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्लाकै चारैतिर नाकामा चेकजाँच कडा पारिएको र तीन सय बढी प्रहरी परिचालन गरिएको प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी सिद्धराज न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रहरीले घटनास्थल सिल गरेको छ । वरपर कसैलाई जान दिएको छैन । फोटो खिच्न दिइएको छैन ।
क कस्को हत्या भयो ?
घट्नास्थलमा रहेकी लघु उद्यम प्रशिक्षक अर्चना गुरुङले पनि नौ जनाको धारिलो हतियार प्रहार गरि हत्या भएको जनाइन् । हत्या गरिएकामा ४१ वर्षिय धनराज शेर्मा, ६ वर्षीया इक्सा शेर्मा, १३ वर्षीया योवना शेर्मा, ८ वर्षीया मुना शेर्मा र १२ वर्षीया आशिका खजुम लिम्बू छन् । त्यसैगरी, फियाक परिवारका ७४ वर्षिय वमबहादुर फियाक, उनकी श्रीमती तथा ३६ वर्षीया जस्मिता फियाक र २६ वर्षीया मनकुमारी फियाकको पनि हत्या भएको छ ।
धनराजको परिवारको ५ जनाको हत्यापछि शव घर भित्रै रहेको तथा बमबहादुरको परिवारका चार जनाको शव घरभित्र तथा बाहिर वीभत्स अवस्था भेटिएको गुरुङले जानकारी दिइन् । बमबहादुरको शब घरबाहिर सिखुवा रहेको थियो । उनको अनुहारभरी धारिलो हतियार प्रहार गरेकाले अनुहार नचिन्ने अवस्था रहेको छ । २ किलोमिटर वरपर शेर्मा र फियाकको घर रहेको छ । ससुरा र ज्वाइँको घर माथि र तल छ । साइनोले उनीहरु ज्वाईँ (धनराज शेर्मा) र सुसुरा (बमबहादुर फियाक) हुनु । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिमले घट्नाबारे विहान ६ः११ बजे मात्र थाहा पाए ।
हत्या ‘सिसाको टुक्रा’ को कारण हो त ?
गएको जेठ ५ गते आइतबार मृतकमध्यकै जसिता फियाकको होटलमा थुक्पा खाजा खाँदा सिसा मिसिएको नुन खाएर ८ जना गम्भीर बिरामी भएका थिए । एक गैर सरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित ३ महिने ढाका वुनाई तालिममा सहभागी भएकाहरुलाई आइतबार बिहान खाजा(थुक्पा) खुवाइएको थियो । नुनमा सिसा मिश्रण भएको थाहा भएपछि उनीहरूलाई संस्थाकै पहलमा बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । बिहानको खाजामा नुन कम लागेको भन्दै नुन थप गर्ने क्रममा सिसाका कणहरू फेला परेको थियो । सोबारे शंका लागेर हेर्दा किचनमा राखिएको नुनको भाँडामा नै सिसा मिसाइएको पाइएको बिरामी मध्येकी सोना लिम्बूले बताइन् । बिरामीमध्ये गम्भीर रहेका मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेका २२ वर्षीया लक्ष्मी लिम्बू र १८ वर्षीया मनिषा नेपालीको जिल्लास्थित समर्पित हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सोही ठाउँका मेनुका दास वर्ष १७, विष्णु विक १९, मुना लिम्बू ९, मनकुमारी फियाक ३३, सोना लिम्बू १९ र युहाना शेर्मा १३ को पाँचथर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । नुनमा सिसाका कण कसले मिसाएको थियो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको बुझिएको छ । तर अनुसन्धान नसकिदै यो घटना हुनु झनै शंकास्पद भएको छ ।
घटना स्थल नजिकै झण्डिए मृत्यु
नौ जनाको हत्या भएको घटना स्थल नजिक नजिकै एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ आरुबोटेका स्थानीय मानबहादुर माखिम झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । घटनाको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मृतक माखिम मृतकको धनराजको आफन्त तथा मृतक बमबहादुरको कान्छो ज्वाई समेत हुन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला राईले माखिमको शब रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको बताइन् । युवक झुण्डिएको अवस्थामा देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।